Wararka - Nidaamka Daaweynta Biyaha ee Munaaradda Qaboojinta
Shirkadaha warshadaha ee isticmaala munaarad qaboojineysa xarunteeda, nooc ka mid ah nidaamka daaweynta munaaradda qaboojinta ayaa badanaa loo baahan yahay si loo hubiyo hanaan wax ku ool ah iyo nolosha adeegga qalabka dheer. Haddii biyaha minaaradda qaboojinta aan la daaweynin, koritaanka dabiiciga, wasakhda, kor u qaadista, iyo daxalka ayaa yareyn kara wax soo saarka dhirta, waxay sababi karaan dhirta waqti yar, waxayna u baahan yihiin qalab qaali ah oo lagu beddelo wadada.
Nidaamka daweynta biyaha ee munaaradda qaboojinta ayaa ah nidaam teknoolojiyad ah oo ka saaraya wasakhda waxyeellada ka soo gaadhayso munaaradda qaboojiyaha biyaha, wareegga biyaha, iyo / ama is-qarxinta Qaabeynta gaarka ah ee nidaamkaaga waxay ku xirnaan doontaa dhowr waxyaalood, oo ay ka mid yihiin:
•nooca munaaradda qaboojinta (wareega wareegaya, mar-marinka, ama wareegga xiran)
•tayada biyaha quudinta
•soosaarida shuruudaha tayada-soo-jeedinta ee munaaradda qaboojinta iyo qalabka
•kiimikada / qurxinta biyaha wareega
•shuruudaha sharciyeynta ee bixinta
•in hoos loo riixaayo iyo inkale waxaa lagu daaweyn doonaa dib u isticmaalida taalada qaboojinta
Sida aan kor ku soo sheegnay, qaybaha saxda ah ee nidaamka daaweynta munaaradda qaboojiyaha waxay kuxirantahay tayada biyaha quudinta iyo kiimikada biyaha wareega wareega ee laxiriira tayada biyaha ee looga baahan yahay taargada qaboojinta gaarka ah iyo qalabka laxiriira. (sida waafaqsan soo-saaraha soo-saaraha), laakiin guud ahaan, nidaamka daaweynta munaaradda qaboojinta aasaasiga ah waxaa caadi ahaan ku jira nooc ka mid ah:
•sifeynta iyo / ama sifeynta xad dhaafka ah
•isweydaarsiga / jilicsanaanta
•kormeerka otomaatiga ah
Waxay kuxirantahay wasakhda kujirta biyaha, iskudhaf nooc kasta oo daaweyntan ah ayaa ugufiicnaan kara xarunta oo kadhigi kara nidaamka daaweynta, sidaa darteed waa muhiim in lala tashado khabiirka daaweynta biyaha si loo hubiyo in nidaamka saxda ah ee munaaradda gaarka ah la tixgelinayo. Waxay kuxirantahay baahida taawarka qaboojinta iyo howsha, qeybahan caadiga ah badanaa wey kufilan yihiin. Si kastaba ha noqotee, haddii munaaraddu u baahan tahay nidaam bixiya waxoogaa dheeraad ah, waxaa laga yaabaa inay jiraan waxyaabo ama farsamooyin aad u baahan tahay inaad ku darto.
Nidaamka daweynta biyaha ee munaaradda qaboojinta waxaa laga yaabaa inay ka kooban tahay tikniyoolajiyadaha lagama maarmaanka u ah in la jaangooyo heerka:
•alkalinity: wuxuu qeexi doonaa suurtagalnimada cabirka kaalshiyamka kaarboonate
•chloride: waxay u nugul tahay birta; heerar kala duwan ayaa loo dulqaadan doonaa iyadoo lagu saleynayo qalabka minaaradda qaboojinta iyo qalabka
•adkaanta: waxay gacan ka geysaneysaa cabirka munaaradda qaboojinta iyo kuleyliyaasha
•bir: marka lagu daro fosfateerka, birtu waxay khaldami kartaa qalabka
•walxaha dabiiciga ah: waxay kobcisaa koritaanka noolaha, taasoo u horseedi karta wasakh, daxal, iyo arrimo kale oo nidaamka ah
•silica: oo caan ku ah inay keento lacag dhigaal adag scale 水垢
•sulfates: sida chloride-yada, waxay u noqon kartaa mid aad u daxalaysa biraha
•wadar adag oo la kala diray (TDS): gacan ka geysto kobcinta, xumbada, iyo / ama daxalka
•wadar adag oo adag (TSS): wasakhda aan milxan ee u horseedi kara miisaanka, filimada noolaha, iyo / ama daxalka
Nidaamyada daaweynta ee gaarka ahi way kala duwan yihiin iyadoo ku xiran shuruudaha taangiga qaboojinta iyo tayada / kiimikada quudinta iyo wareegga biyaha, laakiin nidaamka daaweynta munaaradda qaboojinta caadiga ah badanaa waxay ku jiri doontaa tallaabooyinka soo socda:
Munaaradda qaboojinta qaadashada biyaha qurxinta
Biyaha qurxinta, ama biyaha beddelaya dhiigbaxa iyo uumiga iyo biyaha ka daadanaya munaaradda qaboojinta, ayaa markii ugu horreysay laga soo qaatay isha, taasoo noqon karta biyo ceyriin, biyaha magaalada, wasakhda magaalada lagu daweeyay, dib-u-warshadaynta biyaha wasakhda ah ee dhirta, biyaha ceelka, ama ilo kale oo biyo ah.
Waxay kuxirantahay tayada biyahan, waxaad ubaahan kartaa ama uma baahnid daaweyn halkan. Haddii loo baahdo nidaam daaweyn biyo ah qaybtan ka mid ah geeddi socodka biyo qaboojinta, waa caadi teknolojiyad ka saarta adkaanta iyo silica ama xasilisa oo hagaajisa PH.
Waqtigan xaadirka ah ee hawsha, daaweynta saxda ah waxay hagaajineysaa wareegyada uumi baxa munaaradda waxayna yareyneysaa heerka dhiiga biyaha si ay uga baxaan wixii ka dambeeya waxa lagu sameyn karo kiimikooyinka kaligood.
Shaandhaynta iyo ultra-sifeynta
Tallaabada xigta waxay guud ahaan socodsiineysaa biyaha taarikada qaboojinta iyada oo loo marayo nooc ka mid ah sifeynta si looga saaro wixii walxo ah ee la laalay sida qashinka, jahwareerka, iyo noocyada qaar ee walxaha dabiiciga ah. Badanaa waa waxtar in la sameeyo tan horaantii hawsha, maadaama ka saarida waxyaabaha adag ee korka laga joojiyay ay ka caawin karto ilaalinta xuubka iyo ion isdhaafsiga ion ka wasakhowga dambe ee habka uurka. Waxay kuxirantahay nooca miiraha ee la isticmaalay, walxaha la hakiyay ayaa laga saari karaa hoos ilaa hal mikron.
Ion isweydaarsiga / jilicsanaanta biyaha
Haddii ay jirto adkaansho saaid ah isha / qurxinta biyaha, waxaa jiri kara daaweyn ka saarista adkaanta. Halkii lime, cusbo jilicsan ayaa la isticmaali karaa; hab isdhaafsi kaabis asiidh oo adag, taas oo cusbada lagu soo oogay soodhiyo sodium ah, iyo sida adkeysigu u soo maro, wuxuu leeyahay xiriir aad u sarreeya kalsiyum, magnesium, iyo bir sidaa darteed waxay qabsan doontaa maaddadaas oo waxay ku sii deyn doontaa molecule sodium ah biyaha. Wasakhdaas, haddii ay jiraan, waxay haddii kale sababi doonaan keyd miisaan iyo miridhku.
Ku darista kiimikada
Waqtigan xaadirka ah ee hawsha, sida caadiga ah waxaa jira isticmaalka kiimikooyinka, sida:
•ka hortagga daxalka (tusaale ahaan, bicarbonates) si loo baabi'iyo aashitada loona ilaaliyo qaybaha biraha
•algaecides iyo biocide (tusaale ahaan, bromine) si loo yareeyo koritaanka microbes iyo biofilms
•ka hortagayaasha cabirka (tusaale ahaan, fosforik acid) si looga hortago in wasakhdu samayso kayd ballaadhan
Si fiican loo daaweeyo kahor marxaladan waxay gacan ka geysan kartaa yareynta qadarka kiimikooyinka loo baahan yahay in lagu daaweeyo biyaha waqtigan hawsha, taas oo ah mid ku habboon tixgelinta daaweynta kiimikada badan oo qaali noqon karta.
Haddii biyaha taangiga qaboojiyaha dib loogu dhex wareejinayo nidaamka oo dhan, qayb sifeynta dhinac-socodka ah ayaa kaa caawin doonta ka saarista wixii wasakh ah ee dhibaatada leh ee ku soo galay wasakhda qulqulaya, daadashada, iwm. Sharci wanaagsan oo suulka ayaa ah in, haddii nidaamka daaweynta munaaradda qaboojinta waxay u baahan tahay sifeyn dhinac-durdur ah, qiyaastii 10% biyaha wareegaya ayaa kala shaandheyn doona. Waxay caadi ahaan ka kooban tahay unug tayo badan oo filtarka wax lagu sifeeyo.
Qaybta ugu dambeysa ee daaweynta looga baahan yahay qaboojinta biyaha munaaradda waa burburka ama dhiig baxa taaradda.
Waxay kuxirantahay inta biyo ah ee warshada qaboojintu ubaahantahay inay kuwareegto awooda qaboojinta saxda ah, dhirtu waxay dooran doontaa inay dib u warshadayso oo ay dib uga soo ceshato biyaha iyadoo loo marayo nooc ka mid ah daaweynta boostada oo ah qaab osmosis ama isweydaarsiga ion, gaar ahaan meelaha laga yaabo inay biyuhu yaryihiin. Tani waxay u oggolaaneysaa dareeraha iyo qashinka adag in la uruuriyo lagana saaro inta biyaha la daweeyay dib loogu celin karo munaaradda oo dib loo isticmaali karo.
Haddii biyaha ka imanaya burburka ay u baahan yihiin in la sii daayo, dheecaan kasta oo nidaamku abuuro wuxuu u baahan doonaa inuu buuxiyo dhammaan shuruudaha sharciyeynta. Meelaha qaarkood ee biyuhu ku yaryihiin, waxaa jiri kara khidmado badan oo bullaacadaha ah, iyo nidaamyada kala-saaridda dembiile-yaasha waxay noqon karaan xalka ugu habboon ee wax ku ool ah halkan, maadaama ay gacan ka geysan karaan yareynta kharashka ku xirnaanta biyaha iyo khadadka bullaacad. Sidoo kale, ka bixida daarta qaboojiyaha ee dhiiga bixineysa waa inay la kulantaa qawaaniinta soo saarida dowlada hoose ee maxalliga ah hadii qiiqa dib loogu celinayo deegaanka ama howlo daaweyn ay dowladu leedahay.
Taawarrada warshadaha ee qaboojinta ayaa ah macaamiisha waaweyn ee biyaha. Iyada oo biyo yaraanta ay ka jirto qaybo ka mid ah adduunka, daaweynta biyaha ee wax ku oolka ah ee u oggolaanaysa dib-u-isticmaalka biyaha oo kordhay waa qodob wadista oo saameyn ku leh goorta iyo meesha loo adeegsado munaaradaha qaboojinta. Intaas waxaa sii dheer, shuruudaha adag ee ka saarida biyaha, federaalka, gobolka iyo degmada ayaa dhiiri galin doona habab cusub oo la xiriira qaboojinta daaweynta biyaha.
Nidaamyada qaboojinta ee xiran oo yareynaya qulqulka biyaha in ka badan 90.0% marka la barbardhigo nidaamyada qaboojinta ee ka jira warshadaha kiimikada iyo dhirta tamarta kuleylka. Sidaa awgeed waxay horseed u tahay dalab sii kordhaya oo loogu talagalay nidaamyada wareegga xiran ee howlaha qaboojinta adduunka.